आफ्नो काम छोडने | जब & USAHello देखि क्यारियर स्रोतहरू | USAHello
त्यहाँ मान्छे एक काम छोड्ने निर्णय भनेर धेरै कारण छन्. कसरी आफ्नो काम बाट राजीनामा सिक्न. तपाईं आफ्नो काम छोडने र कसरी राम्रो प्रभाव छोड्न गर्दा भन्न के पत्ता.
काम छोडने पनि भनिन्छ बाट resigning वा छोडेर एउटा जागिर. त्यहाँ राम्रो तरिका र काम छोड्न खराब तरिकाहरू छन्. जब तपाईं अन्त्य गर्ने निर्णय, यसलाई आफ्नो मालिक भन्न सही तरिकामा महत्त्वपूर्ण. तपाईं कम्पनी छोड सम्म आफ्नो सबै भन्दा राम्रो प्रयास जारी गर्नुपर्छ. कसरी आफ्नो सहकर्मीहरू कदम चाल्न तिनीहरूले भविष्यमा तपाईंलाई मदत गर्नेछ त योजना.
आफ्नो काम छोडने अघि
किनभने तपाईँले नयाँ काम पाएका छन् तपाईं छोडेर छन् भने, हुन 100 प्रतिशत तपाईं नयाँ काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ पक्का! तपाईं आफ्नो पुरानो काम बाट राजीनामा अघि निश्चित तपाईं एउटा प्रस्ताव पत्र हस्ताक्षर गरेका छन्. कहिलेकाहीं, कम्पनीहरु आफ्नो प्रस्ताव बारे आफ्नो मन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. तर तपाईं एक सम्झौता हस्ताक्षर गरेका छन् भने र एक सुरु मिति छ, यसलाई आफ्नो मालिक गर्न बताउन समय छ.
यहाँ तपाईं आफ्नो काम छोडने गर्दा गर्न छ राम्रो कुरा हो.
1. सही तरिकामा प्रबन्धकको भन्नुहोस्
अन्य मानिसहरू छैन सुन्न सक्नुहुन्छ जहाँ एक निजी स्थानमा कुरा गर्न तपाईंको कर्मचारी वा प्रबन्धक सोध्न.
कहिलेकाहीं प्रबन्धकहरू पनि व्यस्त छन् र पूरा गर्न सक्दैन. यदि यो मामला छ, त्यसपछि इमेल द्वारा संग resigning, पत्र द्वारा, वा फोन कल संग स्वीकार्य छन्.
तपाईं आफ्नो मालिक भन्न तपाईं कम्पनी आफ्नो समय आनन्द गर्न सक्नुहुन्छ. यदि त्यो छैन साँचो हो, के तपाईं आफूले सिकेका के सराहना भन्न सक्छौं.
तपाईं छोडेर किन व्याख्या तर व्यक्तिगत विवरण दिन छैन. जस्तै, शायद तिमी थप तिर्ने अर्को काम को लागि छोडेर छन्. तपाईं बस तपाईं अर्को स्थिति पाएका छन् भनेर भन्न सकिन्छ.
तपाईं कुनै पनि जानकारी छ कि तपाईं असहज बनाउन कुनै प्रश्न साझेदारी वा उत्तर छैन. तपाईं सधैं भन्न सक्छौं, “म जवाफ रुचाउँछु।”
के छैन प्रबन्धकको अघि आफ्नो सहकर्मीहरू बताउन. तर आफ्नो सहकर्मीहरू बित्तिकै बताउन गर्छन् आफ्नो मालिक थाह रूपमा.
2. कम से कम आफ्नो प्रबन्धक दिन2सप्ताह’ सूचना
आफ्नो काम सम्झौता तपाईं दिन छ नोटिस कति भन्न सक्छ. सूचना तपाईं वास्तवमा जानुअघि तपाईं छोडेर छन् भन्न पर्छ कति टाढा अगाडि मतलब. यदि कुनै यसो सूचना अवधि छ, कम से कम आफ्नो प्रबन्धक बताउन2समय को अगाडी सप्ताह. अग्रिम सूचना दिने विचार देखाउँछ र प्रतिस्थापित गर्न को लागि समय दिन्छ.
कहिलेकाहीं, आफ्नो नयाँ कर्मचारी तपाईं ढिलो सुरु गर्न आवश्यक हुन सक्छ. जबसम्म आफ्नो सम्झौता अन्यथा भन्छन्, तपाईं आफ्नो वर्तमान मालिक गर्न क्षमा चाहन्छौं र तपाईं चाँडै छोड्ने आवश्यक किन बताउन सक्नुहुन्छ. के तपाईं आफ्नो नयाँ काम सुरु गरेपछि व्यक्ति एक जबकि लागि ठाँउ बाट प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्ताव सक्छ.
कहिलेकाहीं प्रबन्धकको अब रहन तपाईं सोध्न. तपाईं हो भन्न छैन आफ्नो सम्झौता हुनुपर्छ तपाईं भन्छन् तपाईं वा नभएसम्म चाहनुहुन्छ नभएसम्म.
एक राजिनामा पत्र तपाईं छोडेर छन् कि. सबैभन्दा हाकिमहरूले तपाईं आफ्नो काम अन्त्य हुँदा एक प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ. यदि यो कम्प्युटरबाट मुद्रण र हस्ताक्षर गरिएको छ यो सबै भन्दा राम्रो छ. तपाईं एउटा मुद्रक छैन भने, तपाईं पनि बस कागज को टुक्रा मा लेख्न सक्छ. यहाँ एक नमूना राजिनामा पत्र तिमी प्रयोग गर्नसक्छौ.
यो एक राम्रो छाप छोड्न महत्त्वपूर्ण छ. समय मा आउन जारी राख्न र प्रारम्भिक नछोड. तपाईं छोड्न सम्म कठिन कार्य जारी राख्न. तपाईं कुराहरू बाहिर चलान यदि गर्न, तपाईंले तिनीहरूलाई मदत गर्न सक्छ भने आफ्नो सहकर्मीहरू सोध्न.
तपाईं आफ्नो काम लिन गर्ने कसैले तालिम गर्न आवश्यक. तपाईं तिनीहरूलाई संग सिकेका सबै कुरा साझेदारी गर्न सबै भन्दा राम्रो के. यसलाई आफ्नो कम्पनी को लागि परिवर्तन सजिलो बनाउनेछ.
तपाईं राम्ररी काम गरे मानिसहरू सबै विदाई भन्न निश्चित. राम्रो सहकर्मीहरू भएकोमा तिनीहरूलाई धन्यवाद. तपाईं भविष्यमा काम को लागि खोज यदि, तपाईं एक दिन तिनीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ व्यावसायिक सन्दर्भ. सन्दर्भ एक संभावित नियोक्ता तपाईं को दयालु बोल्न गर्ने मान्छे हो. तपाईं पनि गर्न सक्छन् तपाईं LinkedIn मा एक सिफारिस लेख्न सहकर्मीहरू सोध्न.
तपाईं आफ्नो पुरानो काम बाँकी गरेपछि, तपाईं अझै पनि गर्न सक्छन् सन्देश, कल, वा आफ्नो सहकर्मीहरू भ्रमण. तपाईं नजिकैको छन् भने, तपाईं नमस्कार भन्न द्वारा रोक्न सक्नुहुन्छ. तपाईं टाढा छन् भने, तपाईं आफ्नो मालिक वा आफ्नो मनपर्ने सहकर्मीहरू गर्न इमेल पठाउन सक्छ. आफ्नो जीवन वा नयाँ काम बारे तिनीहरूलाई समाचार दिन. सम्पर्क मा रहन तपाईं कम्पनी आफ्नो समय सराहना देखाउँछ.
तपाईं राम्रो उपचार छैन किनभने शायद तपाईं आफ्नो कम्पनी छोडेर. त्यो अवस्थामा, तपाईंले यो के गर्न आवश्यक छैन.
त्यहाँ कुराहरू पनि छन् तिमी चाहिए छैन आफ्नो काम छोडने बेलामा के!
यो तपाईं आफ्नो काम वा सहकर्मीहरू संग खुसी थिएनन् सम्भव छ. आफ्नो पुरानो काम वा नयाँ काम मा मान्छे तिनीहरूलाई बारेमा निर्दयी भन्न छैन. तपाईं दुखी छन् भने, तपाईंको साथी वा परिवार मा पोख्न.
बनाउन आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू घर लिन निश्चित. आफ्नो काम देखि उधारो थियो सबै फिर्ता. तपाईं एक कार्यस्थान थियो भने, अर्को व्यक्ति को लागि यो सफा.